Kuchera - Newsway Valve Co., Ltd.
Zvicherwa zvinoreva kuburitsa zvicherwa zvakaita semasikisi (semarasha nezvicherwa), zvinwiwa (zvakaita semafuta asina kuchena) kana magasi (akadai gasi rechisikigo). Kusanganisira kuchera kwepasi pevhu kana pamusoro pevhu, mashandiro emigodhi, nebasa rese rekubatsira, senge kukuya, kubatsirwa uye kurapwa, izvo zvinowanzoitwa padyo nenzvimbo yemugodhi kana saiti yekugadzira zvigadzirwa, zviitwa zverudzi urwu.
NEWSWAY VALVE inopa mhinduro kune indasitiri yezvicherwa inobatsira kuvandudza chengetedzo yezvakatipoteredza, mashandiro ezvinhu epombi mapaipi, hwaro hwenzvimbo & hupenyu hwevharuvhu, uye kudzikisira nguva yekupedzisira inokonzerwa nekugadzirisa.
NEWSWAY VALVE inogona kupa simbi uye maindasitiri maindasitiri ane akakomba sevhisi simbi-yakagara bhora mavharuvhu ayo anomira zvakanyanya kugadzirisa mamiriro. Yedu autoclave mavharuvhu akabudirira zvakazara kuitwa mune slurry pombi kunyorera pasirese.
Main Applications musika:
Iron Yangu Kubvongodza uye Kupisa
Aluminium Mine Kushandisa uye Kugadzirisa
Nickel Mine Kushandisa uye Kugadzirisa
Mhangura Yangu Kushandisa uye Kugadzirisa
Zvinyorwa Zvikuru Zvinosanganisira:
Yakajairwa Kanda Simbi Suo Valve